Sawiro :Madaxweyne ku xigeenka Dowlad Goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay Wakiilka MQ u qaabilsan arimaha Soomaaliya Michael Keating | Hobyo Media Online
Sawiro :Madaxweyne ku xigeenka Dowlad Goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay Wakiilka MQ u qaabilsan arimaha Soomaaliya Michael Keating
Nov 7, 2017 - jawaab
Madaxweyne ku xigeenka Dowlad Goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay Wakiilka MQ u qaabilsan arimaha Soomaaliya Michael Keating iyagoo ka wada hadal arimo badan oo ku adan Galmudug.
Maxamed Xaashi Cabdi Ku xigeenka Madaxweynaha Galmudug ayaa Wakiilka MQ ee arimaha Soomaaliya kala hadlay sidii ay Galmudug dhinacyo badan uga taageeri lahaayeen.
Waxaa uu sheegay Maxamed Xaashi in maamulka GM ee uu madaxweyne ku xigeenka ka yahay uu u baahayahay taageero dhinacyo badan leh sida amniga abuurista ilo dhaqaale iyo dib u heshiisiin dhaba oo dadka deegaanka la dhax dhigo si looga gudbo dhacdooyinka xiliyada qaar qabaa’lada Galmudug dhaxmara.
Sidoo kale Madaxweyne ku xigeenka ayaa Michael Keating wakiilka QM ee Soomaaliya kala hadlay arimaha siyaadada Galmudug iyo xal u helida qilaafaadka hada jira ee saameynta ku yeeshay He’adaha maamulka.
Michael Keating wakiilka QM arimaha Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay inay Galmudug ka taageerayaan dhinacyada ay u baahayihiin in laga caawiyo balse ay taasi ku xirantahay in deegaanka laga helo siyaasad degan iyo amni taabagala.
Kulanka Madaxweyne ku xigeenka Galmudug uu la qaatay wakiilka QM ee Soomaaliya waxaa uu i manayaa xili wali aan xal loo helin qilaaf xoogan ka dhax jir madaxda Galmudug.